मागेको पोशाकले सिकेको कराते , जसले स्वर्णपदक चुम्यो – Himal eNews
शुक्रबार, अशोज ९, २०७७
सैनिक हेलिकोप्टर दुर्घटना ,दुई पाइलटको मृत्यु
भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेका ७९ वर्षीय पुष्पराजले जिते कोरोना
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने
काठमाडौँ उपत्यकामा आज ६ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
नेपालमा आज १३ सय १३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि, १४ सय ५५ जना संक्रमणमुक्त
पाल्पा पहिरोमा पुरिएका तीन महिलाको शव भेटियो
कोरोनाका कारण भारतमा एकै दिनमा १,१४१ जनाको मृत्यु,सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५८ लाख नाघ्यो
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजीनामा
चिनियाँ कम्पनीले भन्यो – कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप सन् २०२१ को शुरुमै आउछ
मेक्सिकोमा कोरोना संक्रमितमध्ये ७५ हजारको मृत्यु
मागेको पोशाकले सिकेको कराते , जसले स्वर्णपदक चुम्यो
Himal eNews २७ माघ २०७६, सोमबार
साथीले दिएको पोसाक लगाएर कराते सिकेको बिर्सेका छैनन्, नवीन रसाइलीले । उनी १२ वर्ष अघिको स्मृतिमा फर्किए, “स्कुलका साथीहरु प्रशिक्षण लिन्थे, हामी हेर्न जान्थ्यौँ, अरूको देखेपछि खेल्ने रहर जाग्यो, साथीहरुले आफ्ना पुराना पोसाक दिए, त्यही लगाएर कराते सिक्न शुरु ग¥यौँ ।”
तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) को स्वर्ण पदक चुम्दा नवीनले तिनै सङ्घर्षपूर्ण दिनहरु सम्झे । काठमाडौँको बालाजु कराते–डो प्रतिष्ठान र गुरु धु्रवविक्रम मल्लको नाम मनमनै लिए । बागलुङ, तमानखोला गाउँपालिका–२ बाट काठमाडौँ झरेकै वर्षदेखि शुरु भएको थियो, उनको कराँते यात्रा । रसाइली परिवारभित्र २४ वर्षीय नवीनले मात्र करातेलाई लक्ष्य बनाएका छैनन् । २६ वर्षीय दाइ राजकुमारले पनि आफ्ना ऊर्जाशील १२ वर्ष करातेलाई दिइसकेका छन् । “बुबाआमासहित काठमाडौँ गएदेखि नै कराते खेल्न शुरु ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई भाइले सँगै सिक्यौँ, अहिले खेल्दैछौँ ।” तेह्रौँ सागमा पनि दुवैले भाग लिए ।
नवीनले स्वर्ण र राजकुमारले कास्य पदक चुमे । “सागमा स्वर्ण जित्नु नै मेरो अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो”, नवीनले भन्नुभयो, “जुन मिहिनेत र समर्पणका साथ करातेमा लागेँ त्यसको प्रतिफल पाएँजस्तो लाग्छ ।” करातेमा लाग्दाका कठिन र चुनौतीपूर्ण दिनलाई नै रसाइली दाजुभाइले सफलताको जग मान्छन् । बागलुङको सदूर गाउँबाट काठमाडौँ छिर्दा उमेर सानै थियो । कुनै ठूलो सपना थिएन । खेलमा भविष्य देख्नु त झन् टाढैको कुरा । तत्कालको उद्देश्य पढ्नु नै थियो । विद्यालय भर्ना भए । खुरुखुरु पढाइमा जान थाले । सँगैका साथीहरु बालाजु कराते–डो प्रतिष्ठानमा कराते सिक्थे । उनीहरु खेल हेर्न जान्थे । त्यही प्रतिष्ठान हो जहाँ रसाइली दाजुभाइले साथीको पोसाक लगाएर कराते सिकेका थिए ।
करातेमा लागेपछि उनीहरु पछाडि फर्कनु परेन । एकपछि अर्को सफलताले पछ्याइरह्यो । खेल प्रतिभाको कदर गर्दै बालाजुको ज्ञानमन्दिर माविले राजकुमारलाई कक्षा ९ र १० छात्रवृत्तिमा पढायो । गोल्डेन गेट कलेजले कक्षा ११–१२ मा ५० प्रतिशत छुट दियो । नवीनले भने एसएलसी ब्राइट हेभन स्कुलबाट गरे । दुवै भाइले पढाइसँगै खेल जीवनलाई अघि बढाए । “अहिले पनि बिहान २ र बेलुकी २ घण्टा प्रशिक्षणमै हुन्छौँ”, राजकुमारले भन्नुभयो, “करातेमा हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने बालाजु कराते–डो प्रतिष्ठान र गुरु धु्रवविक्रम मल्ल हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली करातेको ‘गडफादर’ नै हो ।” एक दशकभन्दा बढीको खेल जीवनमा रसाइली दाजुभाइले कैयन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका छन् ।
नेपालका लागि खेल्न दर्जनभन्दा बढी देश पुगेका छन् । पदकमा तुलनात्मक रुपमा नवीन अगाडि छन् । उनले सन् २०१४, २०१६ मा भारत र २०१७ मा श्रीलङ्कामा भएको साउथ एशियन च्याम्पियनशिपमा लगातार स्वर्ण जितेर ह्याट्रिक गरेका थिए । राजकुमारले गत वर्ष बङ्गलादेशमा भएको सोही खेलमा रजत पदक हात पारेका थिए । उनले सन् २०१८ मा भएको कोरिया ओपन कराते च्याम्पियनशिपमा स्वर्ण जितेका थिए । सन् २०१० देखि नै व्यावसायिक रुपमा कराते खेल्न थालेको राजकुमारको भनाइ छ । “सन् २०१३ मा राष्ट्रिय खेलकूदमा भाग लिएँ, खेल्नकै लागि भारत, मलेसिया, कोरिया, जापान, थाइल्यान्डलगायत देश पुगेको छु”, राजकुमारले भन्नुभयो ।
उनले सातौँमा कास्य र यही वर्ष भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा रजत पदक जितेका थिए । नवीनले भने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पनि स्वर्ण पदक हात पारेका थिए । नवीन यही वर्ष जापानमा हुने ओलम्पिकमा समेत नेपालका तर्फबाट भाग लिन प्रयासरत् छन् । ओलम्पिक छनोटका वल्र्ड सिरिज, प्रिमियर लिग, एशियाली खेलकूद र एशियन कराते च्याम्पियनशिप खेल्नुपर्ने मापदण्ड छ । “ओलम्पिकको लक्ष्य लिएर केही सिरिज र लिग खेल्दैछु, विश्वभरका एक सय खेलाडीको ‘¥याङ्किङ्’मा मेरो नाम ९९ मा छ, मापदण्ड पूरा गरेर अन्तिम ३२ मा परेँ भने ओलम्पिक खेल्न पाउँछु”, नवीनले भन्नुभयो । आउँदो ओलम्पिकमा पहिलोपटक कराते समावेश हुँदैछ । ओलम्पिक खेल्न पाउनु नै नवीनका लागि जीवनकै ठूलो सफलता हुनेछ । “खेलले इज्जत दिएको छ, देशको गौरवका लागि खेल्न पाएका छौँ”, रसाइली दाजुभाइ भन्नुहुन्छ, “राज्यले पनि खेल क्षेत्र र खेलाडीलाई हेरोस् ।”
राजकुमारले अहिलेसम्म परिवारको सहयोगमा खेलमा लागे पनि अब परिवारलाई सहयोग गर्ने बेला आएको बताए । “हामीमा पनि परिवारको जिम्मेवारी थपिँदैछ, खेलाडीलाई आर्थिक सहायता, रोजगारी जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अझै दश वर्ष सक्रिय रुपमा करातेमा बिताउने योजना रसाइली दाजुभाइको छ । तेह्रौँ सागमा पदक जितेपछि गृहजिल्लावासीले उनीहरुलाई सम्झे । जिल्ला र देशकै गौरव बढाएका खुशी साटासाट गरे । बागलुङ नगरपालिका, नेपाल कराते सङ्घ बागलुङ, मालिका सेवा समाज बागलुङलगायत थुप्रै सङ्घसंस्थाले नगदसहित सम्मानित गरे । एकाघरका दाजुभाइले खेलमा देखाएको समर्पण र पाएको सफलता खेलाडी एवं खेलप्रेमीमाझ प्रेरणा बनेका छन् ।
एमबाप्पेलाई कोरोना संक्रमण
वर्षाका कारण लर्ड्समा नेपाल र नेदरल्यान्ड्सको खेल नतिजाविहीन
अघिल्लो सागमा स्वर्ण जितेका कमल यसपटक कास्यमा सीमित
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार
नेपालको एकदिवसीय क्रिकेट खेलमा पारस चम्किए, नेपालले पायो १९० रनको लक्ष्य
१६ श्रावण २०७५, बुधबार
जोशी प्रधानन्यायाधीश नबन्ने निश्चित
ऐतिहासिक एकदिवसिय क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कडा झट्का दिँदै सयौ थुङ्गा नगाई श्रीमान गम्भीर नेपाली गाए राजावादीले
वीपी प्रतिष्ठानको सेक्युरिटी ठेक्कामा मनपरी, लोकल नेताको सेटिङमा उपकुलपतीको मस्ती
लकडाउन उल्लंघन गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली हानेर मार्यो
प्रचण्ड बस्ने घर घेराउको तयारी
जबर्जस्ती करणी : किशोरीको पेटमा ५ महिनाको गर्भ, नेकपाका नेता समातिए
अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल पोष्ट ब. नं. २९२१
प्रकाशक: चेरी फिल्मस् प्रा.लि.
सूचना विभाग दर्ता नं:१३८२\_०७५–७६
अध्यक्ष : हरि बहादुर तामाङ
संस्थापक : प्रदिप राज धामी
सम्पादक : रमेश तामाङ
विशेष सल्लाहकार: आदित्यमान श्रेष्ठ, अविनाथ योगी (अनिल)
Padam Gurung on भ्रष्टजति सबैलाई कारबाहि गर्ने हो भने एकजना व्यक्ति पनि मलामि जानका लागि बाँकी नरहने : अख्तियार प्रमुख
Himal Online TV